Kamakura, toeran-tany any Japon | Vaovao momba ny dia
Kamakura, toeran'i Japon
Mariela Carril | | Japana, Inona no ho hita
Kamakura dia iray amin'ireo mahazatra fitsangatsanganana azo atao avy any Tokyo, Renivohitr'i Japon. Raha tsy nandalo an'ity areti-mandringana ity izao tontolo izao dia ny taona 2020 no taona faramparan'ny fizahan-tany any Japon, miaraka amin'ny Lalao Olaimpika sy ny rehetra, noho izany dia firenena be mpitsidika.
Betsaka ny fitsangatsanganana mora atao avy any Tokyo ary Kamakura dia latsaky ny adiny iray atsimon'ny tanàna. Super akaiky ary tena soso-kevitra, satria ankoatr'izay, ny malaza Buddha Kamakura inona no hitanao amin'ny sary.
Izany dia tanàna amoron-tsiraka izay adiny atsimo avy any Tokyo. Indraindray dia io no ivon-toerana politika tany amin'ny firenena tamin'ny taonjato faha-XNUMX, governemanta izay naharitra zato taona manontolo teo ambanin'ny fifehezana ny basin'i Minamoto sy ny biraon'ny Hojo. Taty aoriana dia nifindra tany amin'ny tanànan'i Kyoto ny fahefana, rehefa nanapa-kevitra ny hipetraka tao ny mpandimby ara-politika.
Androany dia tsotra a tanàna kely mangina misy toerana masina, tsangambato manan-tantara ary tempoly maro. Ary satria eo amoron-tsiraka dia misy moron-dranomasina izay matetika be be rehefa fahavaratra. Ahoana ny fomba handehanana any Kamakura?
Amin'ny lamasinina misy safidy telo. Azonao atao ny mandray ny Odakyu Line izay no fomba mora indrindra. Mividy ny Enoshima Kamakura Free Pass ianao ary ao anatin'izany ny dia mandroso eo anelanelan'ny Shinjuku any Tokyo sy Kamakura. Ho fanampin'izay, ao anatin'izany ny fampiasana ny Enoden, lamasinina iray hafa fa mandeha amin'ny herinaratra, amin'ny vidiny 1520 yen fotsiny. Amin'ny alàlan'ity fitaovam-pitaterana ity dia maharitra 90 minitra vao tonga, koa raha te haka fotoana kely kokoa ianao dia mila mampiasa ny tsipika JR.
JR dia manana ny Shonan Shinjuku Line, izay mampifandray an'i Shinjuku sy Kamakura ao anatin'ny adiny iray ary mitentina 940 yen. Tsara ny miandry ny lamasinina mankany Zushi, izay ilay mijanona ao amin'ny gara Kamakura (fiainganana roa isan'ora), raha tsy izany dia mila miova ianao any amin'ny gara Ofuna. Andalana iray hafa ny JR Yokosuka Line mampifandray ny gara Tokyo amin'i Kamakura. Tsy latsaky ny adiny iray ny dia ary 940 yen ny vidiny.
Misy faritra roa ny faritra: ny Passy maimaimpoana Enoshima Kamakura, amin'ny 1520 yen, izay misy ny fitsangatsanganana Shinjuku / Kamakura miaraka amin'ny fampiasana ny Enoden; ary ny Pass Hakone Kamakura, ho an'ny 7000 yen), izay mamela ny fampiasana ny tsipika Enoden sy ny tsipika Odayu, fa koa ny fitaterana manodidina an'i Hakone mandritra ny telo andro misesy.
Inona no tsidihiko any Kamakura? Ny fizahantany lehibe any Kamakura dia zaraina amin'ny faritra telo akaikin'ny gara: akaikin'ny gara Kita Kamakura, Station Kamakura ary Hase Station. Ahoana no tena tanàna kely afaka mandeha tongotra ianao na, ho an'ny zavatra mahafinaritra kokoa, manofa bisikileta. Misy ihany koa ireo fiara fitateram-bahoaka sy taxi, raha te-hanatratra faritra lavitra kokoa ianao.
Ny fitsidihanay voalohany dia amin'ny Bouddha Kamakura, Kamakura Daibutsu. Sarivongana varahina an'ny Amida Buddha izay eo an-tokotanin'ny Tempolin'i Kotokuin. Sahabo ho iraika ambin'ny folo metatra sy sasany ny haavony ary io no sarivongana Buddha avo indrindra ao amin'ny firenena. Nanomboka tamin'ny 1252 izy io ary tao anatin'ny efitrano malalaky ny tempoly no nisy azy io, saingy nandalo rivo-doza maro ny toerana tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX ka nanapa-kevitra ny hametraka izany mivantana any ivelany.
Kamakura's Great Buddha dia an-tongotra 10 minitra fotsiny na latsaky ny Hase Station, ny gara fahatelo amin'ny Enoden Line avy any Kamakura. Ny gara Enoden Terminal dia eo akaikin'ny gara JR Kamakura ary mampitohy an'i Kamakura amin'i Enoshima sy Fujisawa ity fiaran-dalamby elektrika kely ity. Ny Buddha dia nakatona hatramin'ny volana jona noho ny coronavirus ary androany misokatra izy nefa mihena ny ora: manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 5 hariva. 300 yen fotsiny ny fidirana, latsaky ny $ 3.
El Tempolin'i Hokokuji kely, tsara tarehy, ary somary lavitra izy io. Izy io dia an'ny sekta Rinzai an'ny Zen Buddhism ary natsangana tamin'ny vanim-potoana voalohan'ny Muromachi, izay tempolin'ny fianakavian'i Ashikaga. Miseho izany rehefa miakatra ilay havoana isika, mandalo portico sy zaridaina kely iray mandra-pahatongantsika any amin'ny efitrano malalaky ny trano izay namboarina tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-1923 taorian'ny Horohoron-tany Kanto Lehibe tamin'ny XNUMX.
Ny sarivongana sarobidy indrindra ao amin'ny tempoly dia ny an'i Buddha, fa eo koa ny tilikambo lakolosy kely ary ny harena sarobidy indrindra amin'ny rehetra: kely tsara tarehy zaridaina volotsangana izay ao ambadiky ny efitrano lehibe. Misy toy ny volotsangana 2000 sy lalana tery handehanana, a teahouse aiza no hisotro dite matcha (dite maitso), mandinika an'io hatsarana io. Misy ihany koa ny zohy izay toa mitazona ny lavenon'ny sasany amin'ireo andriana foko Ashikaga.
Ahoana no ahatongavanao any amin'ny Tempolin'i Hokokuji? Mandehandeha avy eo amin'ny fijanonan'ny bus Jomyoji (any amin'ny gara Kamakura no misy azy, 10 minitra amin'ny 200 yen). Azonao atao ny mandray ilay 23, 24 na 36. Raha te-handeha ianao dia afaka mandeha antsasak'adiny na kely kokoa avy eo amin'ny gara iray ihany. Ny Bambu Garden dia misokatra manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 4 hariva ary mikatona ny 29 Desambra ka hatramin'ny 3 Janoary. 300 yen ny vidiny ary raha tianao ny serivisy dite dia mandoa vola 600 yen ianao.
Tempoly iray hafa dia ny Tempolin'i Hase, an'ny sekta Jodo ary malaza amin'ny avo lenta sarivongan'i Kannon iraika ambin'ny folo, andriamanibavin'ny famindram-po. Ny efitrano dia efa ho folo metatra ny haavony ary vita amin'ny hazo voaravaka ilay sarivongana, iray amin'ireo lehibe indrindra eto Japon. Ny angano dia nilaza fa ity hazo ity dia mitovy amin'ilay nampiasaina tamin'ny sary sokitra an'i Kannon of Nara. Ny tempoly dia manana tranombakoka, izay manome fidirana fanampiny, izay mitazona sarivongana, sary ary hafa. Etsy ankilany dia ny Amida-do Hall miaraka amina sariolona volamena folo metatra an'i Amida Buddha.
Ny tempoly, satria eo amoron'ny havoana no misy azy Teresa tsara tarehy avy amin'ny toerana mahafinaritra ny fomba fijery ny tanànan'i Kamakura. Misy ihany koa ny trano fisakafoanana hankafizanao mangina bebe kokoa ary ho hitanao, eo akaikin'ny tohatra miakatra sy midina amin'ny tehezana, sarivongana kely an-jatony Jizo Bodhisattva, izay manampy ny fanahin'ny ankizy hahatratra ny paradisa.
Eo am-pototry ny hantsana no fidirana mankamin'ny tempoly, misy zaridaina sy dobo. Hasedera dia dimy minitra monja miala ny gara Hase. Manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 5:30 hariva ary hatramin'ny 5 maraina eo anelanelan'ny Oktobra sy Febroary. Tsy mikatona andro izany ary 400 yen ny fidirana.
Ny tempoly manan-danja indrindra ao Kamakura dia ny Tsurugaoka Hachimangu. Niorina tamin'ny 1603 izy io ary natokana ho an'i Hachiman, andriamanitra mpiaro ny fianakaviana Minamoto ary samurai amin'ny ankapobeny. Ny tempoly dia miditra amin'ny làlana lava iray izay miala amin'ny lalambe Kamakura, mamakivaky ny tanàna iray manontolo ary miampita eo ambanin'ny toris maromaro. Ny efi-trano lehibe dia eo amin'ny terraces eo an-tampon'ny tohatra. Ao anatiny misy tranombakoka misy sabatra, antontan-taratasy, sarontava ...
Eo ankavanan'ny tohatra, hatramin'ny taona 2010, dia nisy hazo ginko iray izay nanjary toeram-piafenana hanafika ilay basim-borona. Tranainy, volamena tsara amin'ny fararano, tsy tafavoaka tamin'ny tafio-drivotra izy tamin'ny martsa 2010 ary maty.
Eo am-pototry ny tohatra dia misy sehatra izay matetika misy seho mozika sy dihy ary afaka mahita toeram-pialofana sy trano fanampiana fanampiny ianao manodidina azy. Azonao atao ihany koa ny mankany amin'io tempoly io avy eo amin'ny gara Kamakura, na amin'ny bus na an-tongotra. Maimaimpoana ny fidirana.
Tsy azontsika faritana ny isan'ny tempoly ananan'i Kamakura fa azontsika antsoina hoe: Kenchoji, Zeniarai, Engakuji, Meigetsuin, Ankokuronji, Jomyoji, Zuisenji, Myohonji, Jochiji, Tokeiji ary Jufukuji. Tsara tarehy daholo izy ireo saingy marina fa tsy azonao atao ny mandany azy io mahita tempoly, amin'ny fanintelony dia mitovy daholo izy ireo. Ny zavatra atolotray dia tsidiho ny Enoshima sy ny morony ary manao dia an-tongotra.
Enoshima dia nosy kely akaikin'i Tokyo izay mifandray amin'ny morontsiraka amin'ny tetezana izay alehanao an-tongotra. Ny nosy dia manana fitoerana masina, tilikambo fijerena, zohy ary zaridaina. Ny havoana ala dia azo zahana an-tongotra ary amin'izay dia ho hitanao ireo toerana masina maro natokana ho an'i Benten, andriamanibavin'ny harena tsara, fahasalamana ary mozika.
Misy ihany koa ny aquarium ary mahafinaritra ny torapasika, misy rano mafana sy milamina ary foza! Avy ao Kamakura ny Enoden dia maharitra 25 minitra, avy any Shinjuku dia afaka tonga any koa ianao ary mitovy izany avy eo amin'ny gara Tokyo.
Farany, Raha tianao ny mitsangatsangana any Kamakura dia misy lalana telo: ny Daibutsu Tour, ny Tenen Tour ary ny Gionyama Tour, nikatona androany noho ny rivodoza tamin'ny taon-dasa. Raha mandeha amin'ny herintaona ianao dia andramo jerena hoe iza amin'ireo no misokatra. Làlana maitso mahafinaritra sy maitso izy ireo mamakivaky ny havoana mampifandray ny tempoly sy ny toerana masina. Amin'ny ankapobeny dia tsy maharitra mihoatra ny antsasak'adiny hatramin'ny 90 minitra izy ireo, saingy tsy voavoatra izy ireo ka tandremo ny kiraro sy ny orana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Kamakura, toeran'i Japon
Inona no jerena ao amin'ny Ourense
Lausanne, tena ilaina ao amin'ny tanàna Suisse